Toban Askari Itoobiyaan Ah Oo Qarax Lagu Dilay. – Bogga Calamada.com
Toban Askari Itoobiyaan Ah Oo Qarax Lagu Dilay.
Kudhowaad 10 Askari oo Itoobiyaan ah ayaa dhimasho Iyo dhaawac kunoqdey kadib Qarax lagula eegtey wada udhaxeysa Degaanka Yurkud Iyo Degmada Luuq ee Wilaayada Gedo.
Qaraxa Itoobiyaanka ah ee la qarxiyay ayaa markoodii hore ka baxay magaalada Baydhabo iyagoo kusii jeeday dhanka dhulka Soomaali Galbeed ee ay Itoobiya gumaysato, waxaana intii saddex maalmood ah ay lugaynayeen inta u dhaxaysa Wilaayaat-ka Baay iyo Gedo ee Soomaaliya iyagoo ka cabsi qaba weeraro dhaba-gallo ah oo ay Mujaahidinnta kala kulmaan.
Saraakiil mina-baarayaal ah ayaa ku jira askarta ku dhimatay qaraxa ka dhacay duleedka Yurkud, sidoo kale mid ka mid ah gaadiidka ciidamada ayaa bur-bur xoog leh waxaa uu kazoo gaaray qaraxaas oo ay masuulayiisa sheegteen Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Ciidamada Cadowga Itoobiya ee gumaysiga ku haysta qaybo kamid ah dhulka Soomaaliya ayaa dhib weyn waxa kahaystaa isticmaalka wadooyinka mararka ay saheyda isu gudbinayaan ama Ciidanka kala bedelanayaan,waxeyna lakulmaan Qaraxyo, weeraro toos ah iyo Kamaa’inno, waxaana halkaas kazoo gaara khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo bur-burin loo geysto gaadiidka ay wataan.
Ma ahan markii ugu horraysay oo weerar qarax lala beegsado ciidamada Xabashida Itoobiya ee duullaanka gardarrada ah kusoo qaaday dalka Soomaaliya.